စိတ်ကူးပျော်ရာ: September 2015
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/30/2015 09:37:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/30/2015 09:35:00 AM No comments:
အင်္ဂလန်ကိုအလည်သွားတော့ အမျိုးသားရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးအိမ်မှာ ကျွန်မတို့တည်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အမျိုးသားရဲ့မိတ်ဆွေက ချာလီလို့ခေါ်ပါတယ်။ အရင်က တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အမျိုးသားနဲ့အတူ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူပါ။ ချာလီရော သူ့အမျိုးသမီးကက်သရင်းပါ ကျွန်မတို့ကို ဖော်ဖော်ရွေရွေကြိုဆိုကြတယ်။ ချာလီတို့ဇနီးမောင်နှံမှာ အသက်(၇)နှစ်အရွယ် သားလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ကောင်လေးက တစ်ခေါင်းလုံးရွှေဝါရောင်ဆံနွှယ်ရှိပြီး သွက်လက်ချက်ချာပါတယ်။ တရုတ်စကားကို အနည်းအကျဉ်းတတ်ပါတယ်။ ချာလီတို့အိမ်မှာ ကျွန်မတို့တည်းခဲ့တဲ့ရက်အတောအတွင်း သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ သားအပေါ်ထားရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်မျိုးက ကျွန်မတို့ကို နက်နဲတဲ့တွေးတောဆင်ခြင်မှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရဲ့ သားသမီးအပေါ်သွန်သင်ဆုံးမမှုတွေက ကျွန်မတို့နဲ့မတူကြောင်းကို ချာလီတို့အိမ်ရောက်သွားတဲ့ ပထမနေ့မှာပဲ ကျွန်မသတိထားခဲ့မိပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ညစာစားပြီးချိန်မှာ ကက်သရင်းကို ကျွန်မအိမ်မှုကိစ္စကူလုပ်ပါတယ်။ ဒါကို ချာလီတို့က ဒီအလုပ်တွေ ကျွန်မလုပ်စရာမလိုဘူးလို့ တားပါတယ်။ ဒါဟာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေက ကျွန်မတို့လိုပဲ အားနာတတ်လို့ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်မထင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မအထင်ရော အမြင်ပါလွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအလုပ်က သူတို့ရဲ့သားလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဆိုတာကို ကျွန်မတအံ့တသြသိလိုက်ရပါတယ်။
“သူ ဒီလောက်ငယ်တာ ဒီအလုပ်တွေ သူလုပ်နိုင်ပါ့မလား”လို့ ကျွန်မထူးဆန်းစွာမေးတော့ ကက်သရင်းကရယ်ပြီး “မအံ့သြပါနဲ့… သားလေး ၂နှစ်အရွယ်လောက်ကတည်းက ပန်းကန်ဆေးနေခဲ့ပါပြီ။ ဒီအလုပ်က သူ့အတွက် ဘာမှမဖြစ်စလောက်လေးပါ” လို့ဆိုတယ်။
“ဘုရားရေ… ၂နှစ်အရွယ်ကလေးက ဒါတွေကိုလုပ်နိုင်တယ်” လို့ ကျွန်မလွှတ်ခနဲပြောလိုက်မိပါတယ်။
“ဘာဖြစ်လို့ မလုပ်နိုင်ရမှာလဲ” ကျွန်မတအံ့တသြဖြစ်နေတဲ့ပုံကို ကက်သရင်းက ထူးဆန်းသလိုပြန်ကြည့်ရင်း ပြောပါတယ်။
နံဘေးမှာရပ်နေတဲ့ချာလီက ကျွန်မကိုရှင်းပြပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ သား ပန်းကန်မဆေးနိုင်သေးတာကို သူသိပေမယ့် သားကို သူစမ်းသပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက သားဟာ ပန်းကန်ဆေးရင်း တစ်ကိုယ်လုံးရွဲရွဲစိုစေခဲ့တဲ့အပြင် ပန်းကန်တွေပါ လုပ်ခွဲခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ သားကငိုတော့ ချာလီက သားကို ကိုယ်တိုင်ရေချိုးပေးပြီး အဝတ်အစားတွေလဲပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပန်းကန်ကိုဘယ်လိုဆေးရမယ်၊ အဝတ်စနဲ့ ဘယ်လိုခြောက်အောင်သုတ်ရမယ်ဆိုတာကို ချာလီကိုယ်တိုင်လုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သားပန်းကန်ဆေးတတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ချာလီရဲ့အတွေးက ရှင်းရှင်းလေးပါ။ ကလေးကို ကျရှုံးတဲ့အခွင့်အရေးပေးရမယ်၊ ကျရှုံးမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရချိန် အောင်မြင်မှုရရှိတဲ့အထိ အမှားတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြုပြင်ရမယ်၊ ဒါဟာ တတ်ကျွမ်းမှုကို ထိန်းချုပ်ဖမ်းဆုပ်တတ်ဖို့ ကလေးတွေကို သင်ပြပေးနေတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် လူ့ဘဝရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတစ်ခုကိုပါ သင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
“ကလေးကို ကျရှုံးတဲ့အခွင့်အရေးပေးပါ” ချာလီတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ ကလေးအပေါ်သွန်သင်မှုက ကျွန်မကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ အချိန်တော်တော်များများက ကျွန်မတို့က စိတ်ရှည်သည်းခံလိုစိတ်နည်းခဲ့ကြတယ်။ ကလေးကိုပေးလုပ်မယ့်အစား ကိုယ်တိုင်ပဲထလုပ်မယ်လို့ပဲ တွေးကြတယ်။ သတ္တိရှိရှိ ကလေးကိုလက်လွတ်ပြီး စမ်းသပ်ခိုင်းရဲရမယ်၊ ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်အောင် ကလေးတွေငယ်စဉ်ကတည်းက သင်ယူရမယ်ဆိုတာကို မိဘတော်တော်များများလျစ်လျူရှုခဲ့မိကြပါတယ်။ ကလေးတွေက ကျွန်မတို့ရဲ့မျက်စိအောက်မှာ အမြဲရှိနေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရေနွေးပူလောင်တာ၊ ကတ်ကြေးနဲ့ညှပ်မိတာမျိုးက နေ့စဉ်လူနေမှုမှာ အမြဲကြုံတွေ့ရတဲ့ ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ချာလီတို့အိမ်မှာ ကျွန်မတို့နေလာခဲ့တဲ့ရက်အတောအတွင်း သူတို့ရဲ့သားလေးဟာ ဘာမဆိုကိုယ်တိုင်လုပ်၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတာကိုပဲ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ နေ့တိုင်း သူကိုယ်တိုင်နိုးစက်လုပ်ပြီး အိပ်ရာထတယ်၊ သူကိုယ်တိုင် နွားနို့ထည့် ကြက်ဥကြော်တယ်၊ အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးရင် သူကိုယ်တိုင် ကျောင်းကားမှတ်တိုင်မှာ ကျောင်းကားအလာကိုသွားစောင့်တယ်။ ဒါတင်မက အိမ်မှာ ရေပိုက်ပျက်တာ၊ မီးသီးကျွမ်းတာတွေကို သူကိုယ်တိုင်ပြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကားပြင်တာကိုတောင် သူအချက်အလက်ကျကျပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ချာလီတို့ရဲ့သားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ကျွန်မသားရဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုစွမ်းရည်က အဖက်ဖက်မှာ အရမ်းကွဲပြားခြားနားတာကို တွေ့လိုက်မိတယ်။ ခါတိုင်းအချိန်တွေမှာ သားက စမ်းသပ်လုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တောင် တခြားမိဘအများတွေလိုပဲ ကျွန်မတို့က သူမလုပ်နိုင်မှာကို စိုးရိမ်မိတတ်ခဲ့ကြတယ်။
ကလေးကို ကျရှုံးတဲ့အခွင့်အရေးမပေးရင် ကြီးပြင်းဖို့ကို သူဘယ်လိုသင်ယူနိုင်မှာလဲ။
အင်္ဂလန်က မိတ်ဆွေမိသားစုဆီကနေ ကလေးသွန်သင်ဆုံးမနည်းကို ကျွန်မသင်ယူနိုင်ခဲ့ရုံမက အရင်တုန်းက သားကို ကျွန်မသွန်သင်ဆုံးမခဲ့တဲ့တာတွေကိုလည်း တွေးတောဆင်ခြင်စရာရခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့က အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ရတာ မောလိုက်တာလို့ အမြဲငြီးတွားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ကလေးတွေစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ အခွင့်အရေးတော်တော်များများကို ကျွန်မတို့ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ကြလို့ပဲလား….
နိုင်းနိုင်းစနေ (The Chic မဂ္ဂဇင်း စက်တင်ဘာ)
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/30/2015 09:34:00 AM No comments:
ကိုရီးယားစုံတွဲတစ်တွဲရဲ့ အံသြဖွယ် ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှု
ခန္ဓာကိုယ်လှပလိုချင်သူတိုင်းဟာ Gym ကိုသွားကာ အပင်ပန်းခံကာ
လေ့ကျင့်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လိုချင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရဖို့ အတွက်တော့ အနည်းဆုံး နှစ်ချီပြီးလေ့ကျင့်ရပါတယ်။ အခု ကိုရီးယားက စုံတွဲကတော့ ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကို ၅ လ တည်းနဲ့ လေ့ကျင့်ရရှိခဲ့တာကြောင့် ကိုရီးယားမှာ ရေပန်းစားလျက်ရှိပါတယ်။
အနည်းငယ်ဝနေတဲ့ Song Jin Yoo နဲ့ Shin Ji Hoo တို့စုံတွဲဟာ လွန်ခဲ့
တဲ့ ၅ လ လောက်က သူတို့ဆီမှာပိုနေတဲ့ အဆီတွေကို လျော့ဖို့ Gym အတူတကွ ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ နေ့တိုင်း အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်း နဲ့ အ
လေးမလေ့ကျင့်ခန်းများကို ၁ နာရီ ခွဲကြာ နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်စဉ် နေ့တိုင်းမှာ သူတို့ဟာ ကြက်ရင်ဘုံသား ၁၅၀ ဂရမ်၊ အာလူး ၁၂၀ ဂရမ်၊ မက်မွန်သီး၊ ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်ဥ ၃ လုံး (သို့) ၄ လုံး တို့အပြင် အသီးအရွက်တွေကိုလည်း စားလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်း ရလဒ်တွေကို မကြာခဏ အွန်လိုင်းပေါ် တင်လေ့ရှိပါတယ်။ အစတုန်းက မသိမသာရှိနေပေမယ့် ၅ လ ကြာပြီး
လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ခင်က ပုံနဲ့ လုပ်ပြီး ပုံကို နှိုင်းယှဉ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာ
တော့ အားလုံးမင်သက်ကုန်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ selfie စုံတွဲပုံတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မည်သူမဆို စိတ်ပါဝင်စားစွာ တကယ် ကြိုးစားလေ့ကျင့်ပါက လိုချင်တာကို ရနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြနေသလိုပါပဲ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/30/2015 09:29:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/30/2015 09:20:00 AM No comments:
ထားဝယ် ရိုးရာရေအိုးရွက် အကကို ရုပ်သံများတွင် မကြာခဏ မြင်ဖူး
ကြမှာပါ။ ထားဝယ်သူ အချောအလှလေးများရဲ့ အကကို ကြည့်ရင်း
ဒီအကဟာ ပုံမှန်အက တစ်ခုလို့ပဲ မြင်မိကြမှာပါ။ တကယ်တော့ ထား
၀ယ် ရေအိုးရွက် အကဟာ လူတိုင်းကတတ်ရန် မလွယ်ပါချေ။
ရေအိုးရွက်အကကို ထားဝယ်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်
ထားကြသော်လည်း သရက်ချောင်းမြို့နယ်တွင်သာ ဒေသရိုးရာ ယဉ်
ကျေးမှု တစ်ရပ်အဖြစ် တန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်းထားတာ လို့ သိရပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ကပြနေသူများပြောကြားချက်အရ ဒီအကဟာ အမြင်လွယ်
သလောက် သင်ရခက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့
အိုးကို ခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီး က ရ တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ရေအပြည့်
ရှိကြောင်းကို အများသူငှာသိစေဖို့ အိုးထဲကရေပေါ်တွင် ရေခွက်က
လေး တစ်ခွက် တင်ပေးထားရပါတယ်။ ပြီးတော့ ရွက်ထားတဲ့ ခေါင်း
နဲ့ အိုးကြားမှာ ဘာအခုခံမှမရှိတာကို သေခြာကြည့်ရင် တွေ့ရမှာပါ။
ကဖို့ မဆိုထားနဲ့ ပုံမှန်ရေတစ်အိုးကို အခုအခံမပါပဲ ရပ်ဖို့ဆိုရင်တောင်
ရွက်ထားတဲ့ အလေးချိန်ကလည်း ပေါ့ပေါ့လေး မဟုတ်။ ဒါကိုတောင်
တစ်အိုး နှစ်အိုး မက သုံးအိုး ရွက်က နိုင်သူများလည်း ရှိပါတယ်။
ရေအိုး တစ်အိုးရဲ့ အလေးချိန်ဟာ ၇ ပိဿာ ရှိပြီး နှစ်အိုးရွက် က တဲ့သူအတွက် ၉ ပိဿာ ၊ သုံးအိုးရွက် က တဲ့သူ အတွက် ၁၁ ပိဿာ
အသီးသီးအလေးချိန် ရှိပါတယ်။ (အောက်ဆုံး တစ်အိုးသာ အကြီးဖြစ်
ပြီး အပေါ်အိုးများမှာ သေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် )
၇ ပိဿာ အလေးချိန်ကို အခုအခံမပါပဲ ရွက်ရတာကြောင့် အချိန်အနည်းငယ်မျှနှင့်ပင် ခေါင်းကျိန်းနိုင်ပါတယ်။ ရေအိုးရဲ့ဖင်မှာလည်း ချိုင့်ခွက် မရှိ
သလို ၊ ကဖို့ အတွက် သီးသန့်ရေအိုး ဆိုတာကလည်း မရှိတာကြောင့်
ပုံမှန်ရေအိုးများနှင့်ပင် က ရတာကြောင့် ပြုတ်ကျဖို့ လွယ်ပါတယ်။ အရေး
အကြီးဆုံး အချက်မှာ ကမည့် အမျိုးသမီးဟာ အပျိုဖြစ်ရပါမည် ဆိုတာပါပဲ။
ခက်ခဲလှတာကြောင့် ဒီထားဝယ် ရိုးရာရေးအိုးရွက် အကကို ကျွမ်းကျင်စွာ
ကနိုင်သည့် လှပျိုဖြူ အနည်းငယ်သာ ရှိတယ် လို့ သိရပါတယ်။
ဒီအက ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ ကြည့်ချင်ရင်ဖြင့် အောက်က လင့်က သွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
Video Link= https://www.youtube.com/watch?t=48&v=r-RAtWTUPOo
လူသိနည်း မြန်မာ့ဖြစ်ရပ် ၁၀၀ - မောင်ကြည်သန့်
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/30/2015 09:16:00 AM No comments:
ရည်စားတွေဖြစ်လာကြရင် မိန်းကလေးအနေနဲ့ ကိုယ့်ရည်းစားကို အားကိုးတာက ဓမ္မတာပါ။
ဒါပင်မဲ့လည်း အားကိုးလွန်အားကြီးသွားရင်တော့ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ။ ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေလေးကို သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ပါလား။
အောက်မှာ ရေးသားထားတဲ့အချက်လေးတွေထဲမှာ ဘယ်နှစ်ချက် မှန်သလဲဆိုတာကို မှတ်ထားလိုက်နော်။
၀၁. ဖြစ်လာသမျှ ပြသာနာတွေကို အမြဲတမ်း မကောင်းဘက်မှ တွေးနေတတ်တယ်။
၀၂. ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကို ချွဲနိုင်တာကြောင့် နည်းနည်း ရိုင်းရိုင်း ဆက်ဆံတတ်တယ်။
၀၃. ကိုယ့်မှာ ဝါသနာ၊ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ကိစ္စဆိုတာ ဘာမှကို မရှိပါ။
၀၄. ပစ္စည်းတွေကို မစွန့်ပစ်နိုင်ပဲ သိမ်းထားလေ့ရှိတယ်။
၀၅. အလုပ်လဲမလုပ်၊ ကိုယ်ခြေထောက်ပေါ်လည်း မရပ်တည်နိုင်ပါ။
၀၆. အရမ်းစိတ်ဆိုး၊ စိတ်ကောက်ပြီး ရည်စားဖြစ်သူကို အမြဲကလိနေချင်တယ်။
၀၇. အကယ်၍ ယောင်္ကျားလေး သူငယ်ချင်းပဲဖြစ်ပါစေ၊ ပိတ်ရက်တွေမှာ ကိုယ့်ကို မခေါ်ပဲ ယောင်္ကျားလေးတွေချည်းပဲ သွားလာနေတာကိုလည်း မကြိုက်ပါ။
၀၈. ဘာအလုပ်ကို မဆိုလက်ကြောတင်းအောင် မလုပ်ချင်ပါ။
၀၉. သူ့ကိုပို့လိုက်တဲ့ Msg တွေကို သူက ဖတ်ပြီးပင်မယ့်လည်း သူ့ဆီက Msg တွေပြန်မလာရင် အရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်။
၁၀. နေ့စဉ်နေထိုင်စားသောက်တာက စည်းကမ်းတကျမဟုတ်ပဲ ဖြစ်သလို နေတတ်တယ်။
★ အပေါ်တွင်ရေးသားထားသောအချက် ၁၀ချက်တွင် ၁ချက်မှ မမှန်ပါ။
★ အပေါ်တွင်ရေးသားထားသောအချက် ၁၀ချက်တွင် ၃ ချက် မှန်သည့်အတွက် သာမန်သာ ရည်းစားကို အားကိုးသည်။
★ အပေါ်တွင်ရေးသားထားသောအချက် ၁၀ချက်တွင် ၅ ချက် မှန်သည့်အတွက် တော်တော် ရည်းစားကို အားကိုးသည်။
★ အပေါ်တွင်ရေးသားထားသောအချက် ၁၀ချက်တွင် ၈ ချက် မှန်သည့်အတွက် အလွန်ကို ရည်းစားကို အားကိုးသည်။
★ အပေါ်တွင်ရေးသားထားသောအချက် ၁၀ချက်တွင် ၁၀ ချက် မှန်သည့်အတွက် အမြဲတည်း ရည်းစားက အနားမှာမရှိလျှင် မနေတတ်တော့ပါ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/30/2015 09:12:00 AM No comments:
သင့်ရဲ့ ဖုန်းကြောင့် ချစ်သူတွေ ကွဲသွားစေနိုင်တဲ့ အရာများ
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/27/2015 11:24:00 PM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/27/2015 11:23:00 PM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/27/2015 11:14:00 PM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/27/2015 11:12:00 PM No comments:
Facebook မှာ ၃၆၀ဒီဂရီလှည့်ပတ်ကြည့်နိုင်မယ့် ဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ပြီ
Facebook ဟာ ခေတ်စားနေတဲ့ virtual ကမ္ဘာထဲကို ပထမဆုံးခြေလှမ်းချလိုက်ပါပြီ။
ဆိုရှယ်နက်ဝပ်ခ် Facebook ဟာ မနေ့ က ၂၃ ရက်နေ့ မှာ မောက်စ်ကိုအသုံးပြုပြီး ၃၆၀ ဒီဂရီအပြည့် လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် ဗီဒီယိုတွေကို စတင်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/27/2015 11:06:00 PM No comments:
အသင့်သုံး မျက်နှာပေါင်း တင်လွှာအမျိုး မျိုးဝယ်ပြီးတော့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မှာပဲကိုယ်တိုင် ပေါင်းတင်လွှာလေးတွေ လုပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် လွယ်လွယ်ကူကူပေါင်းတင်နိုင်တာကြောင့် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်လုပ်လာနေ ကြပါပြီ။
မျက်နှာပေါင်းတင်အရည် သုတ်လိမ်းပြီး ၁၅ မိနစ်လောက် နေရင်ခြောက်သွားတဲ့အဖတ်တွေ ခွာချလိုက်တဲ့အခါ ချွေးပေါက် တွေပွင့်ပြီး မျက်နှာအရေပြား လန်းဆန်းစိုပြည်စေပါတယ်။
မျက်နှာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ ဖုန် နဲ့ အညစ်အကြေးတွေ၊ အရေပြား ဆဲလ်သေတွေဖယ်လိုက်သလို ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆားဝက်ခြံသမား တွေလုပ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါ တယ်။
ပေါင်းတင်လွှာထဲက အရေ ပြားအားဖြည့်ဓာတ်တွေဟာ မျက် နှာထဲကိုစိမ့်ဝင်သွားတဲ့အတွက် အသားအရေတင်းရင်းကာ ဖြူ ဝင်းနုပျိုစေပါတယ်။
နောက်ပြီးချွေးပေါက်တွေ ကတစ်ဆင့် အရေပြားထဲဝင်မယ့် ဘက်တီးရီးယားတွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပြီး ဒီလိုပေါင်းတင် တာဟာ အကြမ်းမခံနိုင်တဲ့အရေ ပြား (Sensitive Skin)ပိုင်ရှင်တွေအတွက်လည်း သင့်တော်ပါတယ်။ မျက်နှာမှာမွေးညင်းထူတဲ့ သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်း ပေါင်းတင်လွှာမကြာခဏသုတ် လိမ်းပြီး အမွေးတွေဖယ်ရှားနိုင်ပါ တယ်။
မျက်နှာအရေပြားညစ်ထပ် ထပ်ဖြစ်နေရင်လည်း အလှပြင် ဆိုင်တွေမသွားဘဲ အိမ်မှာပဲ ပေါင်းတင်အရည်လေးနဲ့ လုပ်ပေးရင် အသားအရေတွေကြည် စင်စေပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/27/2015 11:05:00 PM No comments:
” ဘာကြောင့် တပည့်တော် အလွန်ဆင်းရဲရတာပါလဲဘုရား” လို့ သူဆင်းရဲ တစ်ယောက်က မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်။
ထိုအခါ မြတ်ဘုရားက ” ဒါနမည်သော ပေးကမ်းခြင်းကို တတ်သိမှု ကင်းခဲ့လို့ပါပဲ” ဟု၍ ဖြေတော်မူတယ်။
“တပည့်တော်မှာ ပေးကမ်းလျူစရာ ဘာမှမရှိလို့ပါဘုရား” လို့ သူသိတဲ့ သူရဲ့ မရှိဆင်းရဲခြင်း အကြောင်းကို သူဆင်းရဲက ဖွင့်ဟပြန်ပါတယ် ။
(က) ကြည်လင်အေးမြ ပြုံးလို့ ရတဲ့ ( မျက်နှာ )ရှိတယ် ။
(ခ) ချိုသာစကား ပီယဝါစာများကို ပြောဆိုနိုင်ပါသော( နူတ်ခမ်း )ရှိတယ် ။
**သူတပါးနားမှာ မခါးရလေအောင် ပြောဆိုခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ယူနိုင်တယ်
(ဂ) ကိုယ်ချင်းစာတရားမွေးဖွားနိုင်တဲ့( နှလုံးသား )လည်းရှိတယ်
** ဂရုဏာတရားကို လက်ကိုင်ထားခြင်းပြီး နှလုံးသားနဲ့ ကုသိုလ်ရယူပါ
(ဃ)အကောင်းမြင်လို့ ရတဲ့ ( မျက်လုံး )ရှိပါတယ် ။
**သူတပါးအပေါ် အကောင်းမြင်ပေးလို့ကုသိုလ်အတွေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်
(င)ကူညီနိုင်တဲ့ (ကိုယ်ခန္ဓာ )ကိုလည်း သင်ပိုင်ဆိုင်ပါတယ် ။
**ကာယဒါန ပြု ခြင်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရယူနိုင်ပါတယ် ။
ှွုှု”ဤသို့ အနည်းငယ်မျှ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသော အချင်းအရာတို့ ဖြင့်လည်းသင်သည် ပေးကမ်းခြင်းဟူသော ဒါနအမှုကို ပြုနိုင်ပေသောကြောင့်သင်နှင့်တကွ လူသားများသည် သူဆင်းရဲဟု မဆိုထိုက်ပေ ။
ယင်းကဲ့သို့ပေးကမ်းလှူဒါန်းမှုတရားနှင့်စိတ်နေသဘောထား မြင့်မြတ်ခြင်းကင်းမှသာလျှင်
ဧကန်ပကတိ ဆင်းရဲသည့်သူဖြစ်ပေသည် ”
ကိုးကား။ ။Budhhist Vision and အရှင်ဇောတိပါလ(ပါရမီဗိမာန်)
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/27/2015 11:02:00 PM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/27/2015 11:00:00 PM No comments:
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်တော့မှာလား၊ ဒါတွေကို သိထားပါ
ကိုယ်ပ်ိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ သိပ်ခက်ခဲတယ်ဆိုပေမယ့် တကယ် အာသီသပြင်းပြရင် တကယ်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်လာဖို့အတွက် မသိမဖြစ်တဲ့အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းလုပ်တော့မယ်စဉ်းစားရင် ဒါတွေကို သိပြီးပြီလား၊ ကျင့်သုံးနေပြီလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကဲဖြတ်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁. ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းပါ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုတတ်ပါစေ။ ဒါမှ ကိုယ့်ဖောက်သည်နဲ့ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေက ဆိုလိုရင်းကို နားလည်ပါလိမ့်မယ်။
၂. ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့်လုပ်ငန်းကို ရှာတတ်ပါစေ။
၃. ကိုယ့်စီးပွားရေးစိတ်ကူးတွေ၊ မေးခွန်းတွေအားလုံးကို ချရေးပါ။
၄. အဆက်အသွယ်တွေနဲ့လွဲမသွားအောင် ဖုန်းကို အနားနားထားပါ။ ဖုန်းထဲမှာ အီးမေးလ်၊ ဘဏ်အကောင့် ဖွင့်လို့ရပါစေ။
၅. ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းဟာ စုစည်းကျစ်လျစ်ပါစေ။ အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ဖို့ အစစအရာရာ စနစ်တကျ ရှိသင့်ပါတယ်။
၆. ၀င်ငွေ၊ ထွက်ငွေကို အမြဲပြုစုပါ။
၇. လုပ်ငန်းကို မားကက်တင်းလုပ်ဖို့လည်း စီစဉ်ပါ။ ဘယ်ကုန်ပစ္စည်း၊ ၀န်ဆောင်မှုမဆို လူများများသ်ိမှ အောင်မြင်မှာပါ။
၈. အလုပ်ကြိုးစားပါ။ ဘယ်အချိန်ရောက်ရောက် ဇွဲမလျှော့ပါနဲ့။
၉. မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် အချိန်ပေးပါ။ ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာ သူတို့က အားဖြစ်စေပါတယ်။
၁၀. က်ိုယ်ပိုင်အချိန် ချန်ထားပါ။ ကျန်းမာရေးကို ငွေနဲ့လဲမပစ်ပါနဲ့။
၁၁. စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်ထုံးစံတွေကို လိုက်နာပါ။ တစ်နပ်စားအကြံတွေက ကိုယ့်စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကို ပျက်သုန်းစေပါတယ်။
၁၂. ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာ ပျော်ပါစေ။
စာဖတ်သူတို့မှာရော တခြားအကြံဥာဏ်ကောင်းတွေ ရှိပါသလား။ Comment မှာ သိခွင့်ပေးခဲ့ပါ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/27/2015 10:55:00 PM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/27/2015 10:53:00 PM No comments:
ဥာဏ်ရည် ထက်မြက်သော ကလေးငယ် ဖြစ်စေရန် ပညာရှင် တို့၏ အကြံပြုချက်များ
- သင့်ကလေးအတွက် သင့် မျက်ဝန်းတွေ အမြဲကြယ် တာရာလို ကြည်လင်ဝင်း လက်နေဖို့ ထိန်းသိမ်းပါ။
- ကလေးငယ်တစ်ယောက် ဆီ မှာတောင့်ခံနိုင်မှု၊ ယုတ္တိကျ မှု၊ တစ်ကိုယ်ကောင်း စိတ် ကင်းမှုနှင့် တခြား ပဉ္စလက် ဆန်ဆန် ရှိနေဖို့ မမျှော်လင့် ပါနဲ့။
- သင့်ကလေးပြောတာကို အာ ရုံစိုက်နားထောင်ပေးပါ။ သူ ပြောသမျှ စကားလုံးတိုင်းကို အလေးနက် ထားပြီး စကား လုံးနောက်ကွယ်က သူ့ရဲ့ ခံ စားချက်ကိုလည်း တန်ဖိုး ထားဂရု စိုက်ပေးပါ။
- သင့်ကလေးငယ်နှင့် အတူ ပြင်ပ ထွက်လည်တာကို အချိန် များများပေးပါ ။လေကောင်း လေသန့် ရှူပေးခြင်းဖြင့် ကလေးငယ် ၏ ကိုယ်၊ စိတ်၊ ဦး နှောက် ကြီးထွားလန်း ဆန်းနေပါစေ။
- သူတို့အတွက် မေတ္တာဟာ အချိန်တိုင်းမှာအရေးတကြီး လိုအပ်နေတာပါ။
- လူမမည်ကလေးပေါက်စလေးများပင်လျှင် တစ်ခါ တစ်ရံအသည်းကွဲ မတတ်ခံ စားရနိုင်သည်ကို နားလည် စာနာပါ။
- သင့်ကလေးကို အမြဲဒုတိယ အကြိမ်ထပ်ကြိုးစား ခွင့်ပေး လိုက်ပါ။
- သင့်ကလေး ဆော့ကစားနေ ခိုက်စောင့်ကြည့်အကဲခတ် နားစွင့်လေ့လာပြီး သူ့ကိုယ် သူနဲ့ သင့်အပေါ် သူဘယ်လို ရှုမြင်သည်ကို သဲလွန်စရှာ ဖွေဖော်ထုတ်ကြည့်ပါ။
- မည်မျှ သေးငယ် ပါစေ၊ ကလေး၏ အောင်မြင်မှုများ ကို တခမ်းတနား အောင်ပွဲခံ ပေးပါ။
- သင့်ကလေး ပြောသမျှ ရယ် စရာစကားများ၊ နှစ်သက် ဖွယ် အသုံးအနှုန်းများကို ချ ရေးမှတ်ထားပါ။ ထိုစကား များဟာ နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာ သင့်မိသားစု အတွက် ပီတိဖြစ်စရာ ဖျော်ဖြေပေး ပါလိမ့်မည်။
- သင့်ကလေးကို တခြား ကလေး နှင့် နှိုင်းယဉ်သော အလေ့ အထကို မမွေးပါနှင့်။
- လုပ်မလား၊ မလုပ်ဘူးလား” ဟူသော ခြိမ်းခြောက်မိတော့ မည့် အနေအထား မျိုးကို ဖြစ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- သင့်ကလေးကို ထပ်ခါထပ် ခါဖတ်ပြဖို့ စိတ်ကြိုက်စာ အုပ်များရွေးချယ်သတ်မှတ် ထားပါ။
- သင့်ကလေးနဲ့အတူတူ ရယ် တဲ့အခါ လိုက်ရယ်၊ ငိုတဲ့ အခါ လိုက်ငိုပါ။
- သင့်ရော၊ သင့်ကလေးပါ နှစ် ယောက် စလုံးတက်လို့ ရနိုင် မည့် သစ်ပင် တစ်ပင်ရှာ ထားပါ။
- တစ်စုံတစ်ရာ(သို့)သစ်ပင် တစ်ပင်ကို ကြီးထွား လာအောင် ကလေးနှင့် အတူတူ ပြုစုပျိုး ထောင်ပါ။
- အောင်မြင်မှု အတွက် သာမက အားထုတ်မှု အတွက်ပါ ကလေးကို ချီးကျူးပါ။
- ကလေးရဲ့ စိတ်အနေမြင့်ရန် “မင်းတတ်နိုင်မှန်း အဖေ၊ အမေသိပါတယ်”ဟူသော အပြောမျိုးဖြင့် အားပေးပါ။
- သင့်ကလေး ပထမဆုံးကျောင်း စတက်သည့်နေ့ကို ဗီဒီယို (သို့) ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးထား ပါ။ ဒါဟာ ဘဝရဲ့ အဓိ က ကျောက်စာ တိုင် တစ်တိုင် ဖြစ်ပါတယ်။
- ကလေးက သင့်ကို တစ်ခုခု ပြန်၍ သင်ကြား ပေးခြင်းခွင့် ပြုပါ။
- ကံဆိုးတဲ့နေ့ ကြုံတွေ့လျှင် လည်း အိုကေပဲလို့ ကလေး သိအောင် သူ့ရှေ့မှာ ဟန် မပျက်နေပြပါ။ သင့်ကလေး ကို ရိုးရာ ဒဏ္ဍာရီများ၊ ပုံပြင် များ၊ နတ်သမီး ပုံပြင် များ ပြောပြရင်း ချစ် ခင်ယုယမှု ပေးပါ။ ဤသည်က ကလေး ကို ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့စေပြီး စာတတ်ပေတတ် ဖြစ်လာစေ ပါလိမ့်မည်။
- အနာဂတ်အတွက် သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိပ်မက်တွေနဲ့ မျှော် လင့်ချက်တွေ အကြောင်း ကလေးကို ပြောပြပါ။
- ဖြစ်နိုင်သမျှ အချိန်တိုင်းမှာ သင့်ကလေးကို ရွေးချယ်နိုင် ခွင့်များ ချပြထားပါ။
- စံချိန်စံညွှန်း(သို့) အခြား ဥာဏ် ရည်ဥာဏ်သွေးဆန်း စစ် ချက်ပေါ် အခြေခံထားပြီး သင့်ကလေး အဆင့်ကို မသတ်မှတ်ပါနှင့်။
- ကလေးကို သူပြုခဲ့သမျှထဲမှ ကောင်းသော လုပ်ရပ်များ ပြန်သတိ ရမိအောင် ကူညီ ဖော်ထုတ်ပေးပါ။ ဤသည် မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံ ကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း ၏ အခြေခံဖြစ်သည်။
- ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့် ကစားကွင်း များသွားသည့် အခါတိုင်း ကလေးကို သူ့ရုံဝင်ခ လက် မှတ်သူ ကိုယ်တိုင်ဝယ်ပါစေ။
- ကလေးကမေးသော ဖြေရ ခက်သည့်မေးခွန်းကို ဥပေက္ခာ မပြုပါနှင့်ဖြေရမှာ ရှက်သလို ရွံ့သလိုလည်း မလုပ်ပါနှင့်။
- ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်း များ ကို ကလေးနှင့်အတူ ကြည့် ရှုနားထောင်ပြီးကမ္ဘာမှာ ဘာ တွေဖြစ်နေသလဲ ရှင်းပြပါ။
- ပညာရေး၏ အရေးပါမှုကို ကလေးကိုသိနားလည် အောင် လုပ်ပါ။
- သင့်ကလေး၏ကိုယ်ရေး ကိုယ် တာမှန်သမျှကို လေးစားပါ။
- သင့်ကလေးမှတစ်ဆင့် သင့် ဘဝကိုပြန်ဖြတ်သန်း၊ ပြန်နေ ထိုင်ဖို့ မကြိုးစားပါနှင့်။
- ပန်းတိုင်ချမှတ်ခြင်းက ဘယ် လောက်တန်ဖိုးရှိကြောင်း ကလေးကို ပြသပါ။
“ဘဝမှာ ကျွန်တော့် သားကို အစကပြန်ပြီး ပြုစုပျိုးထောင် ခွင့်များရခဲ့မယ် ဆိုရင် ကိုယ် ကျင့်တရားနဲ့ သိက္ခာကို အရင် တည်ဆောက်မယ်။ နေဖို့ အိမ်ကို နောက် မှဆောက် မယ်။ လက်ချောင်းတွေနဲ့ ပန်းချီဆွဲတာ ပိုပြီးကျင့်မယ်။ လက်ညှိုး ထိုးပြီး အပြစ်တင် တာတွေ ကိုလျှော့မယ်။အပြင်း အထန် ဝေဖန်ဖို့ထက် ကျိုး ကြောင်း ဆက်စပ်ပြီး ကြည့် တတ်ဖို့ အားထုတ်မယ်။အလုပ် ချိန်နာရီကို ကြည့်မယ့် မျက်လုံးက သားကို ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်ဖို့ သုံးလိုက်မယ်။ သားနဲ့ လမ်းများများ ပိုလျှောက် ပြီးစွန်တွေ အများကြီး လွှတ် မယ်။ အသည်း အသန် အလုပ် တွေကို ရပ်ပြီးသားနဲ့ပဲ အသည်းအသန် ကစားနေ မယ်။ ကွင်းပြင်တွေကို ဖြတ် ပြေးမယ်။ သား နဲ့အတူလေ။ ပြီးတော့ ကြယ်တွေ အများ ကြီးကို ငေးကြည့်မယ်။ စီးပွား ရေးအခွင့် အကောင်းတွေ အစားသားကိုပဲ ပိုပြီးတင်း တင်းကျပ်ကျပ် ပွေ့ဖက်တဲ့ အလေ့ကို လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်” လို့ ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာ ဒိန်းလူမန်က သူ့ရဲ့If I had My Child to Raise Over Again စာ အုပ်ထဲမှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။
(အလင်းဆက်(IR) – Popular Myanmar)
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/27/2015 10:50:00 PM No comments:
တရုတ်ပြည် Jiangxi ပြည်နယ်မှ Hubei ပြည်နယ်သို့ ခရီးသွားတဲ့ကားများကို ရဲများဟာ ထုံးစံအတိုင်း စစ်ဆေးတော့ မမျော်လင့်ပဲ အမေအို တစ်ယောက် ကားနောက်ဖုံးမှာ လိုက်ပါလာတာကို မြင်တွေ့ ရပါတယ်။
သူမရဲ့ သား ဖြစ်သူနဲ့ သားရဲ့ အမျိုးသမီးတို့ဟာ ကား အရှေ့ခန်းမှာ ထိုင်ပါတယ်။ သားငယ်လေး တစ်ဦးပါဝင်ပြီး သူ့သားငယ်လေးတစ်ယောက်တည်းကို ကား နောက်ခန်းမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အိပ်ပြီးတော့ လိုက်နိုင်စေဖို့ ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ယင်းဖြစ်ရပ်ကို ကြည့်ရ မသက်သာတဲ့ ရဲများက စစ်ဆေးတော့ အသက် ၆၀ အရွယ် အဖွားအိုကလည်း သူ့စိတ်သဘောထားအရ ရွေးချယ်ပြီး အနောက်မှာ ထိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ သူ့သား အမှုပတ်မှာ စိုးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကား အနောက်ဖုံးမှာ လိုက်ပါ စီးနင်းခြင်းဟာ အသက်အန္တရာယ် များပါတယ်။ ခုံ မပါပဲ ခြေဆံ့ပြီး ထိုင်လိုက်တာကြောင့် အသက်ရွယ် ကြီးသူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ခါးကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အနောက်ဖုံးဟာ ပစ္စည်းထည့်ဖို့ ထားတာ ဖြစ်တာကြောင့် ထိုင်ဖို့ ဘယ်လိုမှ မသင့်တော် ပါဘူး။
ဒါကို ရဲတစ်ဦးက ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ် တင်တဲ့အခါ ယင်း ကားမောင်းတဲ့ အမျိုးသားတို့ မိသားစုကို ကဲ့ရဲ့ ပြစ်တင်ရှုံ့ချခဲ့ကြ ပါတယ်။ ပိုပြီး ဆိုးတဲ့ အချက် တစ်ခု ကတော့ ယင်းကားဟာ အသက် ၆၀ အရွယ် မိခင်အနေနဲ့ သူရရှိတဲ့ ပင်စင်လစာထဲကနေ သားအတွက် ဝယ်ပေးထားတဲ့ ကား ဖြစ်ပါတယ်။ သား တစ်ယောက် အနေနဲ့ တစ်နေ့ ဖခင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ သူ့ကို ကားနောက်ဖုံးထဲ ထည့်ခံထားရမယ့် အဖြစ်ကို မသိလေသလားဆိုပြီးတော့ comment များ ပေးခဲ့ကြ ပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/27/2015 10:28:00 PM No comments:
လက်ထပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဟာ ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော် လက်ခံယုံကြည်တယ်… ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခင်ဗျားစိတ်ထဲ ဘာမှလိုက်မတွေးခင်မှာ စာကို ဆက်ဖတ်လိုက်ပါဦး…
ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ ကျွန်တော်စတွေ့တုန်းက ကျွန်တော်တို့ ၁၅ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေ အဖြစ်ပဲရှိသေးတယ်…. အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းဖြစ်လာတာ ဆယ်နှစ်တိုင်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ… အဲ့ဒီနောက်တော့ သူငယ်ချင်းဘဝနဲ့ ဆက်မနေတော့ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်…. အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေကနေ ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတဲ့အခါမှာ တကယ့်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ နားလည်မှုတွေရလာမယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးအာမခံပါတယ်….
ဒါပေမဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာ လက်ထပ်ဖို့အတွက် ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေ မဖြစ်ပေါ်အောင်တော့ မကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး… သူနဲ့ကျွန်တော် လက်ထပ်ဖို့အချိန်နီးကပ်လာလေလေ ကြောက်ရွံ့တွေဝေမှုတွေ ပိုဖြစ်လာလေလေပါပဲ…
လက်ထပ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်အသင့်ကောဖြစ်ပြီလား… ကျွန်တော့်ရွေးချယ်မှုက မှန်ကောမှန်ပါ့မလား… သူမဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား… သူမက ကျွန်တော့်ကို ပျော်အောင်ထားနိုင်ပါ့မလား….. စတာတွေကို တွေးနေမိပါတယ်….
ဒီလိုနဲ့ တစ်ညမှာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့အတွေးတွေနဲ့ ကြောင့်ကြမှုကို ကျွန်တော့်အဖေဆီ ရင်ဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်…. ကျွန်တော့်အတွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဖေပြန်ပြောတဲ့ တစ်ခဏဟာ ကျွန်တော့်ဘဝအတွက် ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တဲ့ အချိန်လေးတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…
“သား… တကယ်တော့ မင်းက တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန်တွေးနေတာပဲ… သားကိုအဖေ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောပြမယ်… လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ မင်းအတွက်မဟုတ်ဘူးကွ…. မင်းပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့အတွက် လက်ထပ်ရတာမဟုတ်ဘူး… တခြားသူတွေပျော်ဖို့အတွက် လက်ထပ်ရတာ… ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ မင်းတစ်ယောက်ထဲအတွက်မဟုတ်ဘူး… မိသားစုတစ်ခုအတွက်ပဲ သား…. နှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုးတွေနဲ့ တခြားဘာအကြောင်းအရာတွေအတွက်မှလည်း မဟုတ်ဘူး… အနာဂတ်မှာရလာမယ့် မင်းတို့ရဲ့ ရင်သွေးလေးတွေအတွက်ပဲ… သူတို့ဘဝတိုးတက်မြင့်မားဖို့အတွက် မင်းဘယ်လိုအကူအညီမျိုးလိုချင်သလဲ… သူတို့အပေါ်ဘယ်သူ့ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုမျိုး ရှိစေချင်သလဲ… လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ မင်းအတွက်မဟုတ်ဘူး… မင်းလက်ထပ်လိုက်တဲ့သူနဲ့ပဲ အဓိကသက်ဆိုင်တဲ့အရာပဲ….. ”
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ သူမဟာ ကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးသူဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိလိုက်တယ်… ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သူမကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေစေချင်တယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်…. သူမရဲ့အပြုံးကို နေ့တိုင်းမြင်ချင်တယ်… သူမကို နေ့တိုင်းပျော်ရွှင်ရယ်မောနေစေချင်တယ်… သူမရဲ့မိသားစုမှာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ကျွန်တော်ပါဝင်ပတ်သက်ချင်တယ်… ကျွန်တော့်မိသားစုကလည်း သူမကို မိသားစုဝင်အဖြစ် လိုလားကြတယ်… ကျွန်တော့်ရဲ့တူမလေးတွေနဲ့ သူမ ဆော့ကစားနေတာကို တွေ့မြင်မိတိုင်း ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်မိသားစုလေးကို သူမနဲ့အတူ တည်ဆောက်ချင်နေမိတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်သိပါတယ်…
ကျွန်တော့်အဖေရဲ့ အကြံပြုစကားဟာ တကယ့်ကို ထိရောက်မှန်ကန်လွန်းပါတယ်… သူ့စကားတွေဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ရင် နောက်တစ်ယောက်ကိုပြောင်းလိုက်တာလိုမျိုး အပေးအယူ/အရောင်းအဝယ်ဆန်တဲ့ ဒီကနေ့ခေတ်ရဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေနဲ့တော့ ဆန့်ကျင်နေပါတယ်…
တကယ့် အိမ်ထောင်တစ်ခု… အချစ်စစ်တစ်ခုဟာ ဘယ်တော့မှ သင့်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး… သင်ချစ်ရတဲ့သူ အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်… သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ… သူတို့ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေ… သူတို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ… သူတို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်… တစ်ကိုယ်ကောင်းသမားက “င့ါအတွက်ဘာရနိုင်မလဲ…” လို့ တောင်းဆိုနေချိန်မှာ… ချစ်ခြင်းမေတ္တာသမားကတော့ “ငါဘာပေးနိုင်မလဲ…” လို့ မေးမြန်းနေပါလိမ့်မယ်…
ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေဖြစ်ဖြစ်… လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖြစ်… လူပျိုအပျိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်… ယုတ်စွအဆုံး တစ်သက်လုံးလူပျိုကြီး အပျိုကြီးလုပ်တော့မယ့်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်… လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ ခင်ဗျားတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို သိထားစေချင်ပါတယ်… စစ်မှန်တဲ့ ဘယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကမှ သင့်အတွက်ရယ်လို့ မရှိနိုင်ပါဘူး… အချစ်ဆိုတာ သင်ချစ်ရတဲ့သူအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်…
နောက်တစ်ချက်က ဝိရောဓိသဘောတရားအရ လူတစ်ယောက်ကို ခင်ဗျားပိုချစ်မိလေလေ… ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခင်ဗျားပိုပြီး ရရှိခံစားနိုင်လေလေဖြစ်ပါတယ်… ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ခင်ဗျားချစ်ရတဲ့သူတွေဆီကတင် မကပါဘူး…. သူတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ… သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ… ပြီးတော့ သင်တစ်ခါမှမဆုံတွေ့ဖူးသေးတဲ့ တခြားလူထောင်ပေါင်းများစွာဆီကပါ သင့်ကိုဗဟိုပြုခြံရံပြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ သင့်ထံစီးဆင်းလာပါလိမ့်မယ်…
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာတွေဟာ တကယ်ပဲ သင့်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး… တခြားသူတွေအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်….
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/27/2015 10:22:00 PM No comments:
အလုပ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ပြီဆိုရင်လည်းမိမိကိုယ်ကို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင် စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အလုပ်အကိုင်၊ ရာထူးအဆင့်အတန်းများကိုတက်လှမ်းနိုင်အောင် ကြိုးစား အားထုတ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် ‘Nike’ ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ဆောင်ပုဒ် တစ်ခုရှိပါတယ်။
“There is no finish line” တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အကန့်အသတ်မဲ့ချဲ့ထွင်ဖြစ်တည်နိုင်ခွင့်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ သင်လည်း တစ်ယောက် အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ အတွေ့ အကြုံအရ ကုမ္ပဏီတွေမှာ သင်တန်းတွေပို့ချ ပေးတဲ့အခါ တွေ့ရတာ က စာရေးသူတို့ မြန်မာ ၀န်ထမ်းတွေ တော်တော်များများရဲ့ ပြဿနာ ကြောက် ကြတဲ့ ရောဂါပဲ။
မိမိကိုယ်ကို ချဲ့ထွင်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လို သူတစ်ယောက်အတွက်တော့ အခက်အခဲ ပြဿနာဆိုတာ ရန်သူမဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်သေးသေးလုပ် ရင် ပြဿနာသေးသေးတွေ့မယ်။ အလုပ်ကြီးကြီးလုပ်ရင် ပြဿနာကြီးကြီးတွေ့ မယ်။ ပြဿနာလုံးဝ မတွေ့ချင်ရင်တော့ လုပ်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ အိမ်ထဲမှအိပ်နေမှပဲရပါတယ်။ အဓိကပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်မတွေ့အောင် ရှောင်လွဲဖို့၊ ဆုတောင်းဖို့ မဟုတ်ပါ ဘူး။ ကြုံတွေ့ လာရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အရည်အသွေး၊ အရည်အချင်းတွေ ရှိလာဖို့ မိမိကိုယ်ကိုချဲ့ထွင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြဖို့ ဖြစ်ပါ တယ်။
မိမိကိုယ်ကို ချဲ့ထွင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ပထမဦးစွာ မိမိရဲ့တွေးခေါ်နိုင် မှုစွမ်းရည် (Thinking Capacity) ကိုချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ တွေးခေါ်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကို ချဲ့ထွင်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ်ချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့ အကြံပြုချက်အချို့ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ အလုပ်ပိုများများလုပ်ဖို့အတွက် ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ ဆိုတာကို အာရုံစိုက်ပါ။
လူတော်တော်များများက တစ်နေ့နေ့ သူတို့ဘာတွေပိုလုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာကိုသာ စဉ်းစားနေပြီး သူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဆန်းစစ်တွေးခေါ်စဉ်းစားဖို့ မေ့လျော့နေကြပါတယ်။ လူတော်တော်များများက စာရေးသူရဲ့ ဟောပြောပွဲတွေမှာ၊ သင်တန်း (Training) တွေမှာ ခုလိုမေးကြ ပါတယ် …
“ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွေ မှာ လက်ရှိအခြေအနေ ထက်ပိုပြီး တိုးတက်အောင်မြင်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ” တဲ့။
အဲ့ဒီအခါ စာရေးသူရဲ့အဖြေက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ …
“ဟုတ်ကဲ့၊ အလုပ်ကိုကြိုးစားပြီး လုပ်ပါ”
ဒါပေမဲ့ စာရေးသူရဲ့ အဲ့ဒီအဖြေဟာ အချို့သော အခြေအနေတွေမှာ မှားယွင်းနေတာကို အံ့အားသင့်ဖွယ်တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ တချို့ အခြေအနေတွေမှာ အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ကျတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတော်တော်များများဟာ အလုပ်ကို တော်တော်လေး ကြိုးစားလုပ် ကြပေမဲ့သူတို့လုပ်သလောက် အကျိုးခံစားခွင့် မရကြတာကို ၀မ်းနည်း ဖွယ်တွေ့ရပါတယ်။
အဓိကက ကိုယ်ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကို အာရုံစိုက်ပြီး ပြန်လည် ဆန်းစစ်ကြည့်ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို ပြန်မေးရမယ့် မေးခွန်း ၃ ခုပဲ ရှိပါတယ် …
(၁) ငါဘာတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်လဲ။
(၂) ဘယ်အလုပ်တွေက ငါ့အတွက် အကြီးမားဆုံးရလဒ်တွေရမှာလဲ။
(၃) ဘယ်အလုပ်တွေက ငါ့အတွက် ကြီးကျယ်တဲ့ ဆုလာဘ်တွေ ပေးမှာလဲ။
စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေးပါ။ စဉ်းစားပါ။ ပြီးရင်လုပ်ပါ။
၂။ ငါလုပ်မှ လုပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းမေးနေတာကိုရပ်ပြီး ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားပါ။
“ငါလုပ်မှ လုပ်နိုင်ပါ့မလား” ဆိုတဲ့မေးခွန်းက စာရေးသူတို့ကို သံသယတွေများစွာနဲ့ နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာစေပါတယ်။ အဲ့ဒီမေးခွန်းအစား …
“ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ အစားထိုးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဖြစ်နိုင်ဆုံးနည်းလမ်းတွေကိုရှာပြီး အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါ။ အောင်မြင်မှုတွေက သင့်ကိုစောင့်ကြိုနေပါလိမ့်မယ်။
၃။ တံခါးတစ်ပေါက်တည်းအပေါ် စဉ်းစားနေ တာကို ရပ်လိုက်ပါ။ တံခါးပေါက်တွေအများ ကြီးကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါ။
ပြဿနာတိုင်းမှာ အဖြေတစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဖြေမှန်က တစ်ခုထက်ပိုပြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဖြေမှန်ရရုံနဲ့ ရပ်မနေ ပါနဲ့။ နောက်ထပ်အဖြေမှန်တွေလည်း ရှိနေနိုင်တာမို့ ကြိုးစားအားထုတ် ရှာဖွေပါ။ မမျှော်လင့်ဘဲ အံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းတွေကို တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
၄။ လူတွေက သင့်ကို မျှော်လင့်တာထက် ပိုလုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်း၊ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်၊ သင့်ရဲ့ ၀ယ်သူ Customer တွေက သင့်အပေါ် မျှော်လင့်ထားတာထက် ပိုလုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပါ။ ဘယ်တော့မှ သာမန်နဲ့ ကျေနပ်မနေပါနဲ့။ အကောင်း ဆုံးဖြစ်အောင် အားထုတ်ပါ။ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း အောင်မြင်မှုရဲ့ အထွတ် အထိပ်မှာ အကောင်းဆုံးတွေအတွက်ပဲ နေရာရှိပါတယ်။
၅။ အရေးကြီးကိစ္စရပ်တွေကို အရေးကြီးလာမှ ဆောင်ရွက်တာထက် အရေးကြီးကိစ္စရပ်တွေ ကို နေ့စဉ်နည်းနည်းဆောင်ရွက်သွားပါ။
အောင်မြင်မှုမှာ ဖြတ်လမ်းမရှိပါဘူး။ အရေးကြီးလာမှ အရေးတကြီး ပြူးပြူးပြာပြာဆောင် ရွက်တာထက် အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေ ကို နေ့စဉ်နည်းနည်းနည်းနည်းနဲ့ ပုံမှန်ဆောင်ရွက်သွားပါ။ အောင်မြင်မှုက သင့်ကို စောင့်ကြိုနေ ပါလိမ့်မယ်။ ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/27/2015 10:20:00 PM No comments:
စိတ်ကို ဖြူစင်စေတတ်တဲ့ အင်အားစုတွေကို ကျမ်းစာမှာလာတဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း ပြောရရင်
နံပါတ်တစ်က “သဒ္ဓါ”တဲ့။သဒ္ဓါဆိုတာက “ယုံကြည်တာ၊ ယုံတယ်၊ စိတ်ကြည်တယ်၊ရဲရင့်တယ်၊ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်၊ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်မှာ စိတ်ဝင်စားတယ်”ဆိုတဲ့ သဘောတွေ အားလုံးကို “သဒ္ဓါ”လို့ ခေါ်တယ်၊ယုံတာ တစ်ခုတည်းသာ“သဒ္ဓါ”မဟုတ်ဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ ဗမာစကားမှာ“ယုံ-ကြည်” လို့ တွဲထားတာ။
❖သဒ္ဓါ ဖြစ်လို့ရှိရင် “ယုံ” တယ်။
စိတ်သန့်ရှင်းတယ်၊ကြည်လင်တယ်၊အေးမြတယ်၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှု လုပ်ဖို့ ရဲရင့်တယ်၊ ဖျတ်လတ်တယ်၊
စိတ်ဝင်စားတယ်၊ဒါတွေ အားလုံးဟာ သဒ္ဓါရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေလို့ ပြောတာနော်။
ယုံကြည်ဆိုတော့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် အကန့်အသတ် တစ်ခုတော့ ထားရတယ်။
ဟိုလူပြော၊ဒီလူပြော ယုံသမျှတွေကို သဒ္ဓါလို့ခေါ်တာလား? မဟုတ်ဘူး။
ယုံတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် ဟိုဟာယုံ၊ ဒီဟာယုံ၊ လာလိမ်သွားရင်လည်း
အဲဒါမျိုးက “ပညာမဲ့တဲ့ သဘောတွေ”ပဲ ဖြစ်တယ်။ယုံတယ်ဆိုတာ ဘာကို ယုံတာလဲ ဆိုလို့ရှိရင်
ကံ၊ကံ၏အကျိုးကို ယုံတယ်။ကံ , ကံ၏အကျိုးကို ယုံတယ် ဆိုရာမှာ
ဘာလုပ်လုပ် ကိုယ်ပဲ တာဝန်ယူတာ။ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်ရတယ်လို့ လက်ခံတာနော်။
အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် responsible ပေါ့။ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူရတယ်။
ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်နဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်လို့ လက်ခံတာ၊တချို့က အဲဒီလို လက်မခံဘူးလေ။
အဲဒီတော့ ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရမှာပေါ့။သူများအပေါ် သွားမပြောနဲ့နော်။
ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်ပဲ။အဲဒီလို ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်နဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ လက်ခံတာ။
ဒါ ကံ, ကံ, ကံ၏ အကျိုးကို လက်ခံတာပဲ။“ကမ္မဿကတာ သမ္မာဒိဋ္ဌိ”။
ကံ , ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်တဲ့ သဒ္ဓါတရားအပေါ် အခြေခံပြီးဖြစ်တဲ့ “သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်” လို့ ဆိုရတယ်။
အဲဒီတော့ ကံ, ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်မှု လက်ခံမှုသည် “အခြေခံ သဒ္ဓါတရား” လို့ ဒီလိုပြောရမယ်။
လက်ခံနေရုံလေးနဲ့တော့ အလုပ် မဖြစ်သေးဘူးနော်။လက်ခံပြီးတဲ့အခါ ရှေ့ဆက်လုပ်ဖို့ လိုတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ သဒ္ဓါဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အစကလေးပဲ။တခြားဘာသာတွေမှာတော့ သိပ်အရေးပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ယုံကြည်မှုသည် တကယ့်ကို အစလေးပဲ ရှိသေးတယ်၊
❖ယုံကြည်မှုနောက်မှာ “ပညာ” မလိုက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်...
ယုံကြည်မှုသည် blind faith လို့ခေါ်တဲ့ “မျက်ကန်း ယုံကြည်မှုမျိုး” ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ရင် သဒ္ဓါကို confidence လို့ ပြန်တယ်။confidence ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်တာမျိုး။ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတာမျိုး၊အဲဒါတင်မကဘူး၊
တကယ်ကတော့ faith ယုံကြည်တာမျိုး အားလုံးကို “သဒ္ဓါ” ခေါ်နိုင်တယ်။ကောင်းပြီ။ယုံတယ်ဆိုတာ-
✤နံပါတ် (၁) ကံ, ကံ၏အကျိုးကို “အခြေခံအားဖြင့် လက်ခံမှု”။
✤နံပါတ် (၂)ကျတော့ အဲဒီထက် အဆင့်မြင့်သွားတယ်၊
ဘာကို လက်ခံတာတုန်းဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ “သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီး” ကို ယုံတယ်၊
ဒါ ဗုဒ္ဓရဲ့ အရည်အချင်းကို ယုံကြည်တာ၊ဗုဒ္ဓရဲ့ အရည်အချင်းတွေထဲမှာ ဉာဏ်ဟာ အဓိက
မကျဘူးလား။အေး ၊ ဉာဏ်မရှိလို့ရှိရင် မှားမှားယွင်းယွင်းတွေ ဟောမှာပေါ့၊
အသိပညာ မလုံလောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ဟောမယ်ဆိုရင်မှားမှားယွင်းယွင်းတွေ ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်။
မှားမှားယွင်းယွင်းတွေ လိုက်နာလုပ်မိမယ်ဆိုရင် ထင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလား။ လမ်းစဉ်တစ်ခုက
မှားနေပြီဆိုရင် ဘယ်လိုမှ အကောင်အထည်ဖော်လို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။အကောင်အထည်ဖော်ရင်
ကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်း တစ်ခုမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တော့ဘူးနော်။ဒါကြောင့်မို့ မှန်ကန်မှုဆိုတာ
အသိဉာဏ် ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိမှ ဖြစ်တာ။ဒါလုပ်ရင် ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတာ သေသေချာချာ
သိတဲ့ အသိဉာဏ်မျိုးနဲ့ ဟောမှ မှန်တာ။
ဒါကြောင့်မို့ မြတ်စွာဘုရားက အာမခံတယ်၊“သယံ အဘိညာ သစ္ဆိကတွာ ပဝေဒေမိ”
သူဟောတဲ့ တရားတွေက -ကိုယ်တိုင်သိပြီးမှ ဟောတာတဲ့။
-tradition အနေနဲ့ စာထဲမှာပါလို့ ပြောတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။-ဆရာ့ဆရာကြီးတွေ ပြောခဲ့တဲ့စကားကို မှတ်ထားပြီး ပြောတာမျိုး မဟုတ်ဘူးတဲ့။-သမိုင်းထဲပါလို့ ပြောတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။
-ဘယ် ဖီလိုဆော်ဖာဆရာကြီးက ဘယ်လို ပြောတယ်ဆိုတာမျိုးကို ထပ်ဆင့် တင်ပြတာမျိုး
“သယံ အဘိညာ” - ကံ, ကံ၏ အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိတာ၊ကိုယ်တိုင်သိရုံတင်မကဘူး၊
“သစ္ဆိကတွာ” - တကယ့်ကို မျက်မှောက်ပြုပြီး ဖြစ်တယ်၊သိတာလည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သိတယ်၊
အဲဒီလို အဆင့်မြင့် သဒ္ဓါကျတော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကို ယုံကြည်တာ။
ဒါကြောင့်မို့ စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာ မြတ်စွာဘုရားက“သဒ္ဒဟတိ တထာဂတဿ ဗောဓိံ”။
“တထာဂတဿ- မြတ်စွာဘုရားရဲ့၊ဗောဓိံ- အသိဉာဏ်ကို၊
သဒ္ဒဟတိ- ယုံကြည်တယ်၊ လက်ခံတယ်။
အဲဒါ သဒ္ဓါအစစ်နော်၊ အဆင့်မြင့်သွားပြီ။ဘုရားရဲ့ အသိဉာဏ်ကို လက်ခံတယ်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ပဲ
ဘုရားဟောတဲ့ တရားကိုလည်း လက်ခံတယ်၊ဘုရားဟောတဲ့ တရားအတိုင်း လိုက်နာကျင့်ကြံလို့
အောင်မြင်ပေါက်ရောက်နေတဲ့ အရိယာသံဃာတွေကိုလည်း လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့
အဓိပ္ပာယ် မပြီးပေဘူးလား။အဲဒါကို “အဆင့်မြင့်သဒ္ဓါ”လို့ ခေါ်တယ်နော်။
အဲဒီ အဆင့်မြင့်သဒ္ဓါဟာ “မဂ်”နဲ့ ယှဉ်တွဲပြီး၊လာတဲ့အခါကျတော့ လုံးဝ ခိုင်မြဲတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ အဲဒီ သဒ္ဓါမျိုးကို “အာကာရ၀တီ သဒ္ဓါ”။“အာကာရ၀တီသဒ္ဓါ”ဆိုတာက “ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့
အကြောင်း လုံလုံလောက်လောက်ရှိတဲ့သဒ္ဓါ”လို့ ပြောတာ။အရမ်းမဲ့ယုံတဲ့ သဒ္ဓါ မဟုတ်ဘူးတဲ့။
နောက်တစ်ခုက “ဒဿနမူလိကာ သဒ္ဓါ၊ကိုယ်တိုင် သိမြင်မှုကို အခြေခံတဲ့ သဒ္ဓါ”။
ဘယ်သူ ပြောလို့မှ လက်ခံစရာ အကြောင်း မရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်တိုင် သိတာကိုး၊
ကိုယ်တိုင် မသိရင်တော့ သူများပြောတာ လက်ခံရဦးမှာပဲ။
ဥပမာ ဆိုပါတော့ ရန်ကုန်မြို့နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ရွှေတိဂုံဘုရားရောက်တာ အခေါက်ခေါက် ရှိနေပြီ။
ဘုရားရောက်ဖူးတော့ ရွှေတိဂုံဆိုတာ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ သိတယ်။ဘယ်နားမှာလဲ ဆိုတာလည်း သိတယ်။
ဟိုးနယ်မှာနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ ရွှေတိဂုံဘုရား ကြားတော့ ကြားဖူးတယ်။
ဘယ်နားမှန်း မသိဘူး။ ပုံထဲတော့ မြင်ဖူးတယ်။တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တူရဲ့လား။
ဒီလူက ကိုယ်တိုင်သိပြီး လက်ခံတာ။ဟိုလူက အကြားနဲ့ လက်ခံတာ။
“ဒဿနမူလိကာ” ဆိုတာ “အမြင်”ကို အခြေခံပြီးတော့ လက်ခံတာ၊
မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်သူကမှ ပြောင်းလွဲပစ်လို့ မရဘူး။
တစ်ခါတုန်းက မြတ်စွာဘုရားက ရှင်သာရိပုတ္တရာကို မေးတယ်။
“သာရိပုတ္တရာ- တဲ့၊ အတွေးမပါတဲ့ ကြံစည်မှု၊သုံးသပ်မှုမပါတဲ့ သမာဓိမျိုး ရှိတယ်ဆိုတာ
ယုံကြည်သလား” လို့ မေးတော့
ရှင်သာရိပုတ္တရာက“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော် မယုံပါဘူး၊
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သိတာပါ၊ သူများပြောလို့ ယုံတာ မဟုတ်ပါဘူး”တဲ့။
ဒါ တပည့်တော် ကိုယ်တိုင်ကို ခဏခဏ အကြိမ်ကြိမ် ၀င်စားလို့ ဒီသမာဓိမျိုး ရခဲ့ပါတယ်လို့ ပြောတာနော်။
ဒါကြောင့်မို့ ဓမ္မပဒမှာ ရှင်သာရိပုတ္တရာကို “အဿဒ္ဓေါ”တဲ့၊သူတစ်ပါးစကားနဲ့ ယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်တိုင် သိတာကိုး။
ကိုယ်တိုင်သိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က သူများစကား ယုံစရာ မလိုဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ သဒ္ဓါဟာ ဒီလို “အဆင့်နှစ်ဆင့်”ရှိတယ်လို့ မှတ်ထားရမယ်။တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မတူဘူး။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သဒ္ဓါချင်း မတူဘူး၊
“အသိဉာဏ် ပါတဲ့ သဒ္ဓါ၊
အသိဉာဏ် မပါတဲ့ သဒ္ဓါ၊”
အသိဉာဏ်မပါတဲ့ “ပညာမဲ့ သဒ္ဓါ” ကျတော့ တလွဲ ရောက်သွားတတ်တယ်။
ပညာနဲ့တွဲတဲ့ သဒ္ဓါကမှ တန်ဖိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ “သဒ္ဓါကို ပညာစောင့်မှ လမ်းဖြောင့်မယ်”တဲ့။
ပညာနဲ့ ထိန်းမပေးလို့ရှိရင် သဒ္ဓါက လမ်းချော်သွားနိုင်သေးတယ်။ဒါက “ယုံတဲ့အပိုင်း”။
“ကြည်တဲ့အပိုင်း”က သဒ္ဓါ ဖြစ်လာလို့ရှိရင် ကာမဂုဏ်အာရုံ ခံစားချင်တဲ့ စိတ်တွေ၊
မုန်းတီးတဲ့ စိတ်တွေ၊ ထိုင်းမှိုင်းတဲ့ စိတ်တွေ၊ တွေဝေလွင့်ပျံ့တဲ့ စိတ်တွေ၊
ဒါတွေ အကုန်လုံး ကင်းပြီး စိတ်ဟာ အညစ်အကြေး ကင်းပြီးတော့ ကြည်နေတယ်။
စိတ်ကြည်နေပြီဆိုရင် တရားပွဲသွား တရားနာဦးမှ ဆိုတဲ့ စိတ်လည်း ပေါ်တယ်နော်။
စိတ်မကြည်တဲ့လူ ဒီစိတ် ပေါ်မှာ မဟုတ်ဘူးနော်။အိမ်ဦးဘုရားခန်းလေး ရှင်းပြီးတော့ ပန်းလေးတွေ လဲဦးမှပဲ။ဘုရားဆွမ်းတော် တင်ဦးမှပဲ၊ ဘုရားရှိခိုးဦးမှပဲ၊ ပုတီးစိပ်ဦးမှပဲ၊ ကမ္မဋ္ဌာန်း ထိုင်ဦးမှပဲဆိုတဲ့ စိတ်ကူးဟာ စိတ်ကြည်နေတဲ့အခါမှ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိထားရမယ်။
အဲဒီလို မိမိသန္တာန်မှာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကြည်နေတာဟာလည်း “သဒ္ဓါ”လို့ အဲဒီလို မှတ်ရမယ်။စိတ်ကလေး ကြည်ရုံတင် မကဘူး။တစ်ခါတလေ စိတ်ကလေးက စွမ်းအားတွေ ပြည့်လာတယ်။
တစ်စုံတစ်ခု လုပ်မယ်ဆိုရင် ရွတ်ရွတ်ချွံချွံ လုပ်တယ်။ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်
သဒ္ဓါဆိုတဲ့ စွမ်းအားလေးတွေ ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင် ဟော လှူမှု၊တန်းမှုမှာလည်း နောက်မတွန့်တော့ဘူး။
သဒ္ဓါစွမ်းအား ပြင်းလာလို့ရှိရင် ကုသိုလ်ကောင်းမှု လုပ်ဖို့ရာလည်း နောက်မတွန့်ဘူး။
ဒါ သဒ္ဓါရဲ့ စွမ်းအားပဲ။သဘာဝတစ်ခုမှာ စွမ်းအားတွေ ရှိတတ်တယ်။
အေး ဒါကြောင့်မို့ ဗုဒ္ဓတရားတော်အရ သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် ဒီသဒ္ဓါဟာ perfect ဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့တုံးဆိုတော့ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်
“အမြင်မှားခြင်းဆိုတဲ့ ဒိဋ္ဌိနဲ့ သံသယဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ ၀ိစိကိစ္ဆာ” လုံးဝ ရှင်းသွားပြီ မဟုတ်လား။
အဲဒီတော့ သံသယဖြစ်တာနဲ့ မှားမှားယွင်းယွင်း မြင်တာ မရှိဘူးဆိုရင် သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ တည်ငြိမ်သွားပြီးပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ သူ့ရဲ့သဒ္ဓါဟာ “ခိုင်မြဲတဲ့ သဒ္ဓါ” လို့ ဆိုတယ်။
ကျန်တဲ့ ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ သဒ္ဓါဟာ မခိုင်မြဲသေးဘူး။ပြောင်းလွဲမှုတွေ များစွာ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။
သဒ္ဓါကို ထိန်းမယ့် ပညာကလည်း အားနည်း
နေသေးတဲ့အတွက် ဟိုလူပြောရင် ဟုတ်နိုးနိုး၊ဒီလူပြောရင် ဟုတ်နိုးနိုး၊
ဟိုဘာသာက ဟောရင် ဟုတ်သလိုလို၊ဒီ ဘာသာက ဟောရင် ဟုတ်သလိုလို ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်။
အေး ဒါကြောင့်မို့ ဒီသဒ္ဓါကို ခိုင်မာအောင် လုပ်ဖို့လိုတယ်၊သဒ္ဓါဟာ ခိုင်မာလာပြီဆိုရင် သူနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့စိတ်ထဲက အညစ်အကြေးတွေကို တွန်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။
ကာမစ္ဆန္ဒ ဆိုတဲ့ လောဘတွေ၊ဗျာပါဒ လို့ဆိုတဲ့ အလိုမကျတဲ့ ဒေါသတွေ၊
ဥဒ္ဒစ္စ ကုက္ကုစ္စ ဆိုတဲ့ စိတ်လွင့်တာ၊စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု မရှိတာတွေ စိတ်ပူပန်နေတာတွေ၊
ထိန မိဒ္ဓ လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်အားတွေ လျော့ကျသွားတာတွေ၊လျော့ရဲ ထိုင်းမှိုင်းသွားတာတွေ၊
ဝိစိကိစ္ဆာ လို့ခေါ်တဲ့ သံသယတွေ ဝင်နေတာတွေ၊အဲဒါတွေကို သဒ္ဓါက ပယ်ရှားပစ်နိုင်တယ်။
“သဒ္ဓါရဲ့ စွမ်းရည်” နော်။
❖နောက် စိတ်ကို ပူပန်စေတတ်တဲ့ ကိလေသာတွေကိုလည်း
ဟောဒီသဒ္ဓါက ဖယ်ရှားပစ်နိုင်တယ်။သဒ္ဓါတရား ရှိလာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဟာ
လမ်းမှန်ကို ရောက်မယ်။ မြတ်စွာဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကို “သဟမ္ပတိဗြဟ္မာကြီး”က
“နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီး ဖွင့်တော်မူပါ”လို့ တောင်းပန်တဲ့အခါ ဘုရားက
“ငါ နိဗ္ဗာန်တံခါး ဖွင့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်“ပမုဉ္စန္တု သဒ္ဓံ- ငါ့အပေါ်မှာ ယုံကြည်ချက်တော့
ထားကြ” လို့ ဒီလို ဟောခဲ့တာ။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုလို့ရှိရင် မယုံကြည်ရင် နားထောင်မှာမှ မဟုတ်ဘဲကိုး။
ဒါကြောင့်မို့ နားထောင်ဖို့အတွက် ယုံကြည်မှုက အရေးပါတယ်။ဒီသဒ္ဓါဟာ ကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့
ယှဉ်တွဲပြီး ဖြစ်တာမို့ အင်မတန်မှာ တန်ဖိုး ရှိတယ်။
ကြည်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့စကြဝတေးမင်းကြီးရဲ့ ပတ္တမြားရတနာ ထည့်လိုက်ရင် အနည်တွေထိုင်ပြီး၊
ရေကြည်သွားနိုင်တယ်။ ထို့အတူပဲ လူ့ရဲ့စိတ်ဟာ လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ ဆိုတဲ့ အနောက်တွေ
ရှိနေသော်လည်း ဟောဒီ သဒ္ဓါဆိုတဲ့ သဘောတရားတစ်ခု စိတ်ထဲဝင်လာတာနဲ့
တစ်ပြိုင်နက် အနောက်တွေ အနည်ထိုင်ပြီး ကြည်သွားတယ်လို့ ပြောတာနော်။
❖ဟောစိတ်ကြည်ရင် ကုသိုလ် လုပ်ဖို့အတွက်
စိတ်အားတွေ တက်လာတယ်။ဒါ သဒ္ဓါရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေပဲ။
ကိုယ့်သန္တာန်မှာ သဒ္ဓါဖြစ်လာပြီ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ အခြေအနေတွေ ပေါ်လာပြီလို့ ဒီလိုမှတ်နော်။
အေး ကောင်းပြီ။သဒ္ဓါရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ဘာတွေရှိလဲလို့ဆိုတော့
သဒ္ဓါတရားစွမ်းအား ထက်လာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
(အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်မှာ မြတ်စွာဘုရား ဟောထားတယ်။)
သီလရှိတဲ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဖူးချင်တယ်။တွေ့ချင်တယ်။
ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ဆုံစည်းချင်တယ်။
သဒ္ဓါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့် အကျင့်ကောင်းတယ်။ဘယ်ဆရာတော်ကြီးဖြင့် အကျင့်ကောင်းတယ်။
သီလရှိလို့ ကြည်ညိုစရာ ကောင်းတယ်။အကျင့် အနေအထိုင်ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုး
လူ ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲကလည်း ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းတဲ့သူဆိုရင် တွေ့ချင်တယ်နော်။
အရပ်ထဲမှာ ဒီလူကတော့ သိပ်တော်တာပဲ။အနေအထိုင် ကောင်းတယ်၊ အသောက်အစား ကင်းတယ်၊
ကိုယ်ကျင့်တရား အင်မတန် ကောင်းတယ်။လိမ်တာညာတာ မရှိဘူး၊ အပျော်အပါး မရှိဘူးဆို
“တော်လိုက်တာ၊ တွေ့ချင်တယ်”ဆိုတာ သဒ္ဓါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား တစ်ခုပါပဲ။
✤ “သဒ္ဓမ္မံ သောတု မိစ္ဆတိ”
သူတော်ကောင်းတရား ဆိုရင် နာချင်တယ်၊ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် တရားပွဲ ရှိတယ်ဆိုရင်
သွား နာချင်တယ်။တကယ့် အစစ်အမှန် တရားဓမ္မတွေကို သူက နာယူချင်တဲ့စိတ် ဖြစ်တယ်။
✤ “၀ိနယေ မစ္ဆေရမလံ” နှမြော ၀န်တိုခြင်းဆိုတာ သူ့ဆီမှာ မရှိဘူး။စိတ်က ပေးဖို့ ကမ်းဖို့ပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာအတွင်းက ပေးဖို့ ၊ ကမ်းဖို့ အသင့် ဖြစ်နေတယ်။
တချို့က ရှိလည်း ပေးချင်မှ ပေးတာလေ။မရှိလို့ မပေးတာက တခြားလေ။
“မစ္ဆရိယ” ဆိုတာ နေရာတကာရှိတာ။မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ပိုဖြစ်တတ်တယ်။
မီးဖိုချောင်ထဲမှာဆိုရင် ဟင်းကောင်းလေးချက်ရင် ဘေးမှာထားပြီးတော့ ဒါ ငါ့အတွက်ဆို၊
သူများကို မပေးချင်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်သေးတယ်။အဲဒီတော့ မစ္ဆရိယဆိုတာက လွယ်လွယ်လေးနဲ့
မစ္ဆရိယဆိုတဲ့ အညစ်အကြေး ကင်းတဲ့သူမှာသူ့ဖို့ ၊ ငါ့ဖို့ဆိုတာ မရှိဘူး။အတူတူပဲ။
ခွဲဝေခြင်း မရှိဘူး၊ ဒါကတော့ ဘယ်သူ့အတွက်၊ ဒါက ဘယ်သူ့အတွက်၊ ဒီလို မထားဘူး။
အကုန်လုံးပဲ ညီတူညီမျှ ဒီလိုဟာမျိုး ရှိတယ်။ခွဲခြမ်း၊ခွဲခြမ်း မရှိဘူး။
ခွဲခြမ်း၊ခွဲခြမ်း လုပ်လာရင်တော့ အဲဒါ မစ္ဆရိယ ရှိနေပြီနော်။ဒီလို မှတ်ရမယ်။
✤လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ပြောပြီဆိုရင်လည်းကြည့်။မစ္ဆရိယ၀င်လာပြီဆိုရင် အကောင်း မပြောနိုင်ဘူး။ဟိုလူတစ်ယောက်က တော်လိုက်တာလို့ ပြောလို့ရှိရင်
“ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်”ဆိုပြီး အပြစ်ပြောတတ်တယ်။အဲဒါ “မစ္ဆရိယ အခြေခံပြီး ပြောတာ”လို့ မှတ်ပေတော့နော်။“ဒါပေမယ့် …”တက်လာတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက်
စိတ်အညစ်အကြေး တစ်ခုခုတော့ လာပြီနော်။အဲဒီလို ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။
✤နောက် အရှင်အာနန္ဒာတို့ကျတော့ ဘယ်လောက်တောင် ပြောတုန်းဆိုရင်
ကုသိုလ်ကောင်းမှု လုပ်တဲ့နေရာမှာတောင် ဝေယျာဝစ္စ လုပ်ကြတဲ့အခါ မစ္ဆရိယ ရှိလာပြီဆိုရင်
သူက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ညှာလာတာ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ညှာပြီးတော့ နည်းနည်း သက်သာတဲ့
အလုပ်ကို ရွေးလုပ်လာတယ်။အဲဒါ “ကိုယ့်ရဲ့ ချမ်းသာမှုမှာ မစ္ဆရိယဖြစ်တယ်” လို့ ခေါ်တာ။
“ကာယမစ္ဆေရ ဂရုနော”- ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ညှာလိုက်တာ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ညှာလိုက်တော့ လုပ်ရမယ့် လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်ကို မလုပ်တော့ဘူး၊
တရားအားထုတ်လို့ရှိရင် “သိပ်ပင်ပင်ပန်းပန်း အားမထုတ်နဲ့ ကျန်းမာရေး
ထိခိုက်လိမ့်မယ်” ဆိုပြီး ညှာလိုက်တာ၊အဲဒါလည်း မစ္ဆရိယ သဘောတဲ့။
အဲဒီ အညစ်အကြေးတွေ အားလုံးကို သဒ္ဓါ စွမ်းအား ကြီးမားလာပြီ ဆိုလို့ရှိရင် ဖယ်ရှားပစ်နိုင်တယ်လို့
ဟောထားတယ်နော်။စိတ်အညစ်အကြေးတွေ လုံးဝ ပျောက်ကွယ် သွားနိုင်တယ်။
သဒ္ဓါက ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ရဲရင့်စေတယ်၊ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဋ္ဌကထာက ဆွေးနွေးထားတာလေး
“ဘာသာခြားတွေကော သူတို့ဘုရား သူတို့မယုံဘူးလား”လို့ မေးစရာ ရှိတယ်။
“အဲဒါကို သဒ္ဓါလို့ ခေါ်နိုင်မလား”တဲ့။
ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသကတော့ ဒီသဒ္ဓါဆိုတဲ့ စကားလုံးမှာ
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ သုံးတာ အကောင်းဘက်ပဲ သုံးတယ်။အဆိုးဘက် မသုံးဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ စိတ်ဖြူစင်မှု အင်အားစုများလို့ ပြောတာနော်။
မှားမှားယွင်းယွင်း ယုံကြည်တာမျိုးကို သဒ္ဓါလို့ မခေါ်ဘူးတဲ့၊
ဒါကြောင့်မို့ မမှန်ကန်တဲ့ အရာကို မှန်ကန်တယ်လို့ ထင်တယ်။
ဆိုပါစို့၊ ကိုယ့်ကို တန်ခိုးရှင်က မဖန်ဆင်းဘဲနဲ့ ဖန်ဆင်းတယ်လို့ ထင်တာ အမှန်လား၊ အမှားလား။
အဲဒီ အမှားမျိုးကို လက်ခံတာကျတော့ ဒါ “သဒ္ဓါ” လို့ မခေါ်ဘူးတဲ့။ဒါက “သက်သက် စဉ်းစားဉာဏ်
ကင်းမဲ့တာပဲ” လို့ ဒီလို ပြောတယ်။သဒ္ဓါဆိုတာ အဲဒီဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့။
ယုံကြည်ထိုက်တဲ့ နေရာမှာ ယုံကြည်တာမျိုးကို သဒ္ဓါလို့ သုံးရတယ်။ ဒါက အဋ္ဌကထာဆရာရဲ့
နောက်တစ်မျိုး စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ယုံကြည်တာတွေဟာ ပညာနဲ့ ယုံကြည်တာ ရှိတယ်။
ပညာမဲ့ ယုံကြည်တာ ရှိတယ်။အဲဒီတော့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောကြားတဲ့ သဒ္ဓါဆိုတာ
ပညာနဲ့ အထိန်းပါတဲ့ အသိဉာဏ်နဲ့ ယုံကြည်တဲ့ သဒ္ဓါလို့ ဒီလို ယူမယ်ဆိုရင်
“ယုံတာတွေဟာ သဒ္ဓါတော့ သဒ္ဓါပဲ။သို့သော် ပညာမဲ့သွားရင် လမ်းချော်သွားနိုင်တယ်”
အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ၏ “အဘိဓမ္မာ မြတ်ဒေသနာ”မှ- ကောက်နှုတ် ကူးယူပူဇော်မျှဝေပါသည်။】
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/24/2015 08:47:00 AM No comments:
ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာ ဒီနည်းဖြင့် သိနိုင်
ခန္ဓာကိုယ် ထုထည်အတိုင်းအဆ ညွန်းကိန်း (Body Mass Index) ဟာ ကျန်းမာရေးအဖို့ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် လွန်ကဲမှု ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ဖို့ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ နည်းလမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဝလွန်ခြင်းကြောင့် ရောဂါအန္တရာယ် တစ်ခုခုရရှိသူများအနက် သုံးပုံတစ်ပုံဟာ ကျန်းမာနေသူများအဖြစ် ဖော်ပြထားကြောင်း body mass index ရဲ့ တွက်ချက်မှုများအရ သိရပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ဘယ်လို့ ဆုံးဖြတ်မလဲ။
ခန္ဓာကိုယ်ထုထည်ညွန်းကိန်းနဲ့ တိုင်းတာမှုစနစ် ထည့်စဉ်းစားမယ့်အစား မိမိအရပ်အမောင်းနဲ့ ခါးတိုင်းနှစ်ခုကြား ကွာဟမှုကို ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ဒီစမ်းသပ်နည်းက အချိန်အနည်းငယ် (စက္ကန့် (၃၀) ခန့်) သာကြာပြီး ကြိုးတစ်ချောင်းတည်းကိုသာ လိုအပ်ပါတယ်။ စက်ချုပ်ဆရာသုံးပေကြိုးဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
ကြိုးတစ်ချောင်းကို မိမိအရပ်မောင်းနဲ့ အညီဖြတ်ပါ။ သို့မဟုတ် ပေကြိုးနဲ့ မိမိအရပ်မောင်းကို တိုင်းပါ။ ကြိုးကို ခလယ်ကနေ ခေါက်ချိုးချိုးပြီး ခါးမှာ ပတ်လည်တိုင်းပါ။ ကြိုးကို ချည်လို့ရနေရင် သင် ထိတ်လန့် ပူပင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ သင်ဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကြိုးအစွန်းနှစ်ဖက် ထိရုံလေး သို့မဟုတ် လုံးဝ မထိဘူးဆိုရင် အနည်းငယ် စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပြီး အစားအစာကို အတိုင်းအချင့်နဲ့ စားသုံးမှု စသင့်ပါပြီ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/24/2015 08:40:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/24/2015 08:36:00 AM No comments:
ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူငယ်ချင်းကို တစ်ပတ်ကြာစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ခွေးကလေး
စက်တင်ဘာလ အစပိုင်းလောက်တုန်းက Tillie ဆိုတဲ့ ရွှေရောင် Retriever ခွေးလေး နဲ့ အမဲလိုက်ခွေးလေး Phoebe တို့ဟာ Vashon ကျွန်းမှာ လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။ ငါးရက်လောက် ရှာပြီး မတွေ့တဲ့နောက် သူတို့ပိုင်ရှင်ဟာ Vashon ကျွန်း တိရစ္တာန်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်ကို ပုံနှင့်တကွ အကြောင်းကြားတဲ့ပိုစ့်တင်ခဲ့ပါတယ်။
တင်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ လူစိမ်းတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့အိမ်နားမှာ Tillie နဲ့တူတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကို တွေ့မိကြောင်းအသိပေးတာကြောင့် VIPP ( Vashon Island Pet Protectors) စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ ခွေးလေးတွေ
ကို လိုက်လံရှာဖွေကြတော့ Tillie ကို တွေ့ပါတယ်။
" Tillie ဟာ ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်ပေမယ့် ပြေးမလာပါဘူး။ ရေလှောင်ကန်
ဟောင်း အစပ်မှာပဲ နေမြဲနေနေပါတယ်။ သူမဟာ ကန်ထဲပဲ စိုက်ကြည့်နေ ပါတယ်။ ကန်ထဲကို ကြည့်လိုက်တော့မှပဲ အဖြေကိုသွားတွေ့ပါတယ်။ သူမ
ရဲ့ သူငယ်ချင်း Phoebe ဟာ ကန်ထဲကို ရောက်နေတာကြောင့်ပါ " လို့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က ဆိုပါတယ်။ တစ်ပတ်လုံးလုံး အစာမစားရပေမယ့် မိုးရေကိုသောက်ခဲ့ရဲတဲ့အတွက် နှစ်ကောင်စလုံး ကျန်းမာနေပါတယ် လို့ သိရပါတယ်။
Tillie ဟာ သူ့ဘာသာ ပြန်လို့ရပါလျက်နဲ့ သူငယ်ချင်းအနားမှာ တစ်ပတ် လုံးလုံး စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာပါ။ လူတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့သူငယ်ချင်းကို ချစ်ခင်စောင့်ရှောက်တတ်သလို တိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာလည်း သူငယ်ချင်း
ကို ချစ်တတ်ကြောင်းကို ဒီခွေးလေး နှစ်ကောင်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်က သက်သေပြနေပါတော့တယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/24/2015 08:34:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/24/2015 08:27:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/24/2015 08:25:00 AM No comments: